Netanyahu oo dalbaday in loo midoobo Iiran iyo Obama oo yiri “Qorshe ma keenin” – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Netanyahu oo dalbaday in loo midoobo Iiran iyo Obama oo yiri “Qorshe ma keenin”
Ra’iisul wasaaraha Israa’iil Benjamin Netanyahu ayaa u sheegay congresska Mareykanka in heshiis la xiriira nukliyerka lagala hadlo Iiraan inay wadada u xaareyso inay hesho hub atoomik ah.
Mr Netanyahu ayaa sheegay in iiraan ay sii ahaaneyso cadowga Mareykanka, ayna halis ku tahay bariga dhexe.
Hadalka wuxuu ahaa kii looga bartay Netanyahu. Waxa uu isku qasay siyaasadda cabsida iyo tan geesinimada.
Iiraan waxa ay galaalgal ku leedahay arrimaha bariga dhexe, gaar ahaan dagaalada Suuriya, Ciraaq, Yaman iyo qalalaasaha Lubnaan, taas oo cabsi gelineysa Israa’iil oo aan dooneyn in waxyeello ay gaarto qof yahuud ah.
Mr Netanyahu waxa uu tilmaamay in caalamka ay tahay inuu si wadajir ah ugu istaago joojinta wax uu ugu yeeray Jahwareerka, sundullada iyo argagixinta Iiraan iyadoo taasi ay ahayd midda uu aadka uga digayay.
Balse madaxweyne Obama ayaa sheegay in aysan jirin xal lagu dabaqi karo hadalka Netanyahu uu u jeediyay aqalka congresska ee Mareykanka.
Mr Obama ayaa intaa ku daray, haddaan Iiraan lala heshiin inay suuragal tahay inay dardar geliso barnaamijkeeda nukliyerka.
Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa sheegay in R/wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu uusan la imaan wax cusub oo lagu dabaqi karo wadahadalka lagu joojinayo hubka Nuleerka Iran.
Khudbadda Netanyahu waxa ay ahayd mid buuq badan dhalisay, sababtoo ah, afhayeenka xisbiga Jamhuuriga ayaa casuumay asigoo aan ku wargelin xisbiga dimuquraadiga iyo aqalka cad.
Doorashoyiinka guud ee Israa’iil ayaa la qabandoonaa laba isbuuc kaddib, waxaana dadka dhalleeceeyay hadalka Netanyahu waxa ay sheegayaan in arrintan uu uga faa’ideysanaayo dano siyaasadeed.
Danta ugu horeyso ayaa ah inuu markale noqdo Ra’iisul wasaare, tan labaadna, inuu xoojiyo taageerada Jamhuuriyiinta Mareykanka si uu u daciifiyo xiriirka taariikhiga ah ee Yahuudda ay la leeyihiin xisbiga Dimuquraadiga.
Shariif Xasan oo jago wasiir u magacaabay Madoobe Nuunow oo si weyn u mucaaradi jiray
Daawo sawirrada: Jaziirad bisaduhu ka badan yihiin dadka!